Midziyo, Yezvemukati | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Simba, Mukati
Ndokumbirawo kuraira .... ini ndoda kutenga sofa rekona. Ndeipi michina yakavimbika zvikuru: dolphin kana bhuku reeuro?
Ndokumbirawo kuraira .... ini ndoda kutenga sofa rekona. Ndeipi michina yakavimbika zvikuru: dolphin kana bhuku reeuro? Ini ndinopa zano dolphin, ini ndinoifarira zvakanyanya Chinhu chikuru ndechekuti kune akanaka anogadzira, uye iyo fanicha iri nyore, yakagadzirwa nezvinhu zvakanaka. Kana iwe ukarara ...
Iko kicheni chipi chaunosarudza: glossy kana matte ????
Ndeipi kicheni yekusarudza: yakajeka kana matte ???? Ini handidi glossy-on nm nguva dzose mafinger prints. Asi aya ndiwo maonero angu. Matte, pane kubwinya nzvimbo dzese dzinozoonekwa. Nguruve dzakagadzirwa nevana. Do ...
Ndeipi inokuvadza, uye ingozi ipi iyo inogadzirwa ne chipboard uye laminated chipboard?
Chii chinokuvadza, uye fanicha ine njodzi sei ine chipboard uye chipboard? Isu neimwe nzira takamhanyira mune yakaderera-mhando chipboard, tichitenga fenicha yevana. Rainhuwirira zvekuti vana vakatadza kurara. Takatama kwevhiki ...
Vhura pafriji! Ndinoda hovha pane firiji, kubva kune vavakidzani. Pane munhu akazviona here?
Fridge kukiya! Ndiri kuda kukiya pafiriji kubva kuvavakidzani. Pane chero munhu akazviona izvi? Pane imwe nguva pandakaona firiji yemazuva ano ine kiyi muchitoro, ndakashamisika zvikuru. Saka tarisa uwane. uye…
Chii chinonzi mita?
Chii chinonzi mita inomhanya? Square mita imwe yakafara ne1m 1х1m kureba ingori 1 mita kureba zvinhu kureba mumamita 1 mita kureba nemamita 1 paupamhi Mucheka ...
Nzira yekusiyanisa sei kusimba kwehuputi pahuvara? Uye chii chinonyanya kukosha kwe sofa? uye chii chakanakisisa che sofa?
nzira yekusiyanisa huwandu hwefuro rabha neruvara? uye ndeipi yakanyanya kuwanda kwesofa? uye chii chakanyanya kuomarara pasofa? kuwanda kuri nyore kusiyanisa neruvara. musimboti iwoyu wakafanana nematanho ekusiyanisa huremu hweapuro ne ...
Kuongorora nezve firiji electrolux? Zvakakodzera kutenga here?
Kuongorora nezve firiji ye electrolux? zvakakodzera kutenga here? Ndine musangano weKaliningrad ... iyo firiji pachayo inoshanda nemazvo, asi zvigadzirwa zvepurasitiki hazvisi kugehena. Iyo firiji yakanakisa yatinayo VestFrost Electrolux zvakare yakanaka kwazvo ...
Ndeipi mutsago iri nani - ngamera mvere kana holofiber? Ndeupi wakasununguka uye unogara kwenguva refu?
Ndeipi mutsago iri nani - ngamera mvere kana holofiber? Ndeupi wakasununguka uye unogara kwenguva refu? Iko kusimba kweiyo holofiber piro iri kusvika kune 1 kuwacha. Ini handigone kutaura chero chinhu nezve makushe ngamera ...
Inguva yakareba sei chikwama chegungano chichioma? Dry, inopisa mumba.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uome iyo polyurethane foam? Yakaoma, inopisa, nzvimbo. zvinoenderana neuwandu, kana iwe uchipupa furo mikova, extrusions, materu, nezvimwewo, saka zviri nani kutanga kunongedza, uye wozonyatso ...
Ndinoda kuvaka mishonga yekugeza mumakicheni
Ini ndoda kuvaka yakasununguka yekuwacha muchina mukicheni 60 cm haina kuitwa netsaona. Makina asina kudzika haana kugadzikana zvakanyanya pakutenderera. Zvisinei, vanogona kufamba. Uye rova ​​madziro zvakaomarara ...
Chii chinonzi modular furniture?
chii chinonzi modular fanicha? kana ndisina kukanganisa iyi imwe uye yakafanana.Midziyo yemakurukota ndeimwe fanicha ine kabhineti. Kureva, ine pasi, denga, mativi uye madziro ekumashure. Modular fanicha ...
Ndeipi singi yekubikira iri nani "mortise" kana "pamusoro", +/-
Ndeipi singi yekubikira iri nani "mortise" kana "pamusoro", +/- Dzika-mukati masinki ari echokwadi anonakidza, asi kana iwe uine kicheni mune chaiyo inopisa musangano, kwavanobika, makedheni uye kunyangwe vana vadiki zvakanyanya zuva rese ...
Ivanovskaya yakawanda yemabhedha kutenga mabhandi kana kwete? Pane shanduro 1300 r. chikwata chemhuri.
Ivanovskaya coarse calico yekutenga machira emubhedha kana kwete? Pane saiti 1300 r. kit yemhuri.Hakuzi kutambisa mari here? Tarisa jira. Ivo vanayo kunge gauze. HAPANA kukosha. Kubasa kwedu ...
Chii chinofanira kunge chiri kukwirira kwedesheni ????
Chii chinofanirwa kuve kukwirira kwedesktop ???? Zvekuti zvaive nyore kunyora Chii 60 cm?! ! Standard simbi tafura rutsigiro h = 715 + kugadzirisa + tafura. Uye tafura refu ...
Ndiudze, ingani mamita masendimiti inofanira kuva kubva pasi kusvika kumaketeni?
Ndiudze kuti mangani masendimita anofanira kubva pasi kusvika kumachira? Ini handifarire kana ndichipika pasi, ndichihotsira mufashoni. Cm 2, 3 kubva pasi. Shanu. 10-45 approx. Kureba kwemaketeni ...
Chii chinonzi eco-ngozi? Ndiri muimba imwechete ndichiedza kutsanangura kuti zviri nani kupfuura ganda rinowanzoitika! Ichokwadi here?
Chii chinonzi eco-dehwe? Vanoedza kunditsanangurira kuti mune imwe salon zviri nani kupfuura zvakajairika dehwe! Ichokwadi here? eco-dehwe chigamba chinofema. asi ikozvino…
Ndeipi chinhu icho machira akarembera?
Chii ichi chinhu icho machira akarembera? PaPasternak: ... Zuva rechando mukuvhura kwemaketeni asina kusimbiswa. Iwo maketeni akarembedzwa pa cornice, uye ipapo iwo anodhonzwa kumusoro. Kana usadhonze =))). Wikipedia-Cornice ...
Ndezvipi zvidzitiro zvemaketani ndinofanira kutora?
Ndeapi saizi yemaketeni andinofanira kutora? Zviri nyore kusona iyo yaunoda modhi yemaketeni kuti urongedze: muyera anouya kwauri, otora zviyero, wobva wasarudza iyo modhi yaunoda, kubhadhara machira uye basa - uye mirira ...
Zvinokwanisika here kumutsidzira rutivi rutsva rwegirazi uye sei? detailed instructions
Zvinoita here kuti umutsiridze kumashure kwegirazi uye kuti ungazviita sei? yakadzama mirayiridzo Amalgam.Kuti udzorere yakasangana amalgam pagirazi, iyo nzvimbo inoda kuiswa muhurongwa inonatswa nekureruka kukwiza donje) nepepa ...
Ndechipi sofa iri nani pane chitubu kana mapfupa PPU ???? iyo inogara yakasimba? Ndiri kufarira mubvunzo
Ndeipi sofa iri nani pane chitubu kana orthopedic polyurethane foam ???? ndeipi inogara yakasimba ???? Ini ndinopindura mubvunzo uyu zvakanyanya Orthopedic iri nani uye inogara yakasimba Ini newandaidzidza naye tikazova nemabhedha akafanana (zvitubu zvekugadzirwa kweRomania - izvo kubva paudiki) ...